Global Nepalipatra | News Nepal | No. 1 News Portal of Nepal
काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा लामो समयदेखि सिर्जना भएको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन अधिकृत कर्मचारी ऋषिराज रेग्मीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
पहिरोले अवरुद्ध बनेको दशरथचन्द राजमार्ग सञ्चालनमा
मोरङको रतुवामाईमा खाल्डोभित्र युवतीको शव भेटियो
काठमाडौँ। क्यानडा भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले आइतबार राति भएको टी–२० खेलमा ओन्टारियोलाई ५५ रनले पराजित गरेको छ। टी–२० खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै ४ विकेट गुमाएर २०९ रन बनाएको थियो।
‘रनिङशिल्ड’ प्रतियोगिताको उपाधि व्यासलाई
तनहुँ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति तनहुँको आयोजनामा सम्पन्न जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि व्यास नगरपालिकाले जितेको छ । प्रतियोगिता शनिबार सुरु भई आइतबार सम्पन्न भएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्मालाई विश्वकप फुटबल हेर्न कतारी राजदूतको निम्तो
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल हेलबीच भेट भएको छ। आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री शर्मा र राजदूत हेलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो।
काठमाडौँ। एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा लगानीकर्ताहरुमाझ बैशाख १ गतेदेखि असार १७ गतेसम्म ७९ दिनको लागि नयाँ योजना ल्याएको थियो। यो योजना गत शुक्रबार असार १७ गते समाप्त भएको छ। क्यापिटलले ग्राहकहरुले देखाएको उत्साहजनक सहभागीतालाई मध्यनजर गर्दै यो योजनाको समय थप गर्ने भएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख पचास हजार मूल्य बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंकले आज ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
काठमाडौँ । शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ५८ अङ्कले उकालो लागेको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि नेप्से परिसूचकले उकालो यात्रा तय गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ५७.६५ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ८६.४२ मा पुगेको छ । त्यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १०.२१ अङ्कले उकालो लागेर ३९८.८२ मा पुगेको छ ।
विराटनगर। यसअघि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेसहित पाँच सदस्यले बजेटको सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा रु १०० खर्च कटौती गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो। प्रस्तावको पक्षमा बोल्दै सदस्य न्यौपानेले सरकारलाई अझ जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताएका थिए।
'राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ?'
- ईश्वरी भट्ट
फ्रान्समा २५ प्रतिशत मानिसहरू बहिरोपनको शिकार, हेडफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो अध्ययनबारे जानकारी लिनुहोस्
एजेन्सी । आजकल अटो होस्, बस होस् वा मेट्रो, हरेक व्यक्तिले कानमा इयरफोन लगाएको पाइन्छ । जुन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ।
धेरै पढिएका खबर
तारकेश्वरमा यसरी मनाईयो राष्ट्रिय धान दिवस (फोटो फिचर)